I-Super Mario Run iya kufuna unxibelelwano olusisigxina nolusisigxina lwe-intanethi | Iindaba zeGajethi
I-Super Mario Run iya kufuna unxibelelwano olusisigxina nolusigxina lwe-intanethi
Ijagi yokuqala yamanzi abandayo ukusuka kwiNintendo ukuya kubasebenzisi beSuper Mario Run kwi-iOS (kwaye kamva kwi-Android), kwaye umdlalo uya kufuna unxibelelwano olusisigxina ukuba sifuna ukonwabela umdlalo. Into edla ngokuxhaphaka kwimidlalo ithathwa njenge "freemium", kodwa ayisiyiyo imeko yeSuper Mario Run, eya kufuna intlawulo iyonke ye- € 10 ukuba into esiyifunayo kukuvula umdlalo opheleleyo. Umlinganiso esingenakuwuqonda ukuba umdlalo ubungayi kuba nentengiso okanye iinkqubo zokulandela umkhondo womsebenzisi Yintoni uNintendo anqwenela ukusigcina sinxibelelene ngelixa sidlala iSuper Mario Run?
Ewe, ndingathanda ukwazi, nangona kunjalo, yonke into ibonisa ukuba amathandabuzo am azakuhlala apho ixesha elide, okucacileyo kukuba asizokwazi ukujonga umdlalo weplumber ngamehlo afanayo naphambi koko. Unxibelelwano olusisigxina alubonakali luluncedo. Siya kuqonda ukuba kwimeko ye-Android iyenziwa ukuthintela ukugqobhoza kwesicelo kunye nelahleko yesiphumo semaliNangona kunjalo, kwimakethi ye-iOS, ukusetyenziswa kweepiriti kushiyekile kwaye kunqabile, ke oko kubonakala ngathi ngumlinganiso ogqithileyo abaya kuhlawulela aboni kuphela.
Asazi ukuba esi sicelo siza kudla idatha kangakanani, okucacileyo kukuba andizukuqhushumba inqanaba ledatha ngokudlala umdlalo ofuna ukuhlawulwa ngokupheleleyo nge- € 10. OKANYEUmlinganiso weNintendo ogxekwa kabukhali kwinethiwekhi, Kwaye kufanelekile ngokwembono yam ethobekileyo. Okwangoku, kwabo bafuna "ukukhulula isuti yabo yokutsiba", banokuya kwiVenkile yeApple emsebenzini kwaye bazame iSuper Mario Run nakweyiphi na izixhobo zokubonisa ze-iOS ezinesicelo esifakelweyo. Nangona kunjalo, umhla wokugqibela wokumiliselwa usondele ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Super Mario Run iya kufuna unxibelelwano olusisigxina nolusigxina lwe-intanethi
Umaleko weaudi, ikhibhodi, imouse, umkhondo wokulandelela kunye nekhadi lemizobo ngaxeshanye
Le yimifanekiso yokuqala yomdlalo weZelda kwiNintendo Shintsha